अब एकदिवसीय विश्वकपमा १४ र टी२० विश्वकपमा २० टिम हुने - टि. एल. एन पोस्ट
तौल कम गराउन शल्यक्रिया गर्दा अभिनेत्रीको ज्यान गयो
आलियाको ‘आरआरआर’ कन्ट्रोभर्सी : सामाजिक सञ्जालबाट पोष्ट हटाएकोमा दिइन् यस्तो स्पष्टीकरण
६९ वर्षीको उमेरमा बप्पी लहरीको निधनको कारण के थियो ?
Home खेलकुद अब एकदिवसीय विश्वकपमा १४ र टी२० विश्वकपमा २० टिम हुने
अब एकदिवसीय विश्वकपमा १४ र टी२० विश्वकपमा २० टिम हुने
सन् २०२४ देखि २०३१ सम्मको साइकलमा आइसीसी क्रिकेट विश्वकपमा टीम संख्या बढ्ने भएको छ । अब एकदिवसीय विश्वकपमा १४ र टी२० विश्वकपमा २० टिम सहभागी हुनेछ ।
आगामी साइकल अन्तर्गत सन् २०२७ र २०३१ को एकदिवसीय विश्वकप क्रिकेटमा १४ टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आइसीसीले एकदिवसीय विश्वकपमा सहभागि संख्या बढाउने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन विश्वकपमा १० टिमलाई मात्र सहभागि गराइएको थियो । गतवर्ष जिम्बावे र आयरल्यान्ड जस्ता टेष्ट टोलीलेनै विश्वकप खेल्न नपाउँदा आइसिसीको चर्को आलोचना भएको थियो । सन् २०२३ मा हुने एकदिवसीय विश्वकपमा पनि १० टिमले मात्र खेल्ने तय छ ।
यस्तै, २०२४ देखि टी२० विश्वकपमा २० टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएका छन् । आइसीसीले सन् २०२४, २०२६, २०२८ र २०३० को टी२० विश्वकपमा २० टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने जनाएको छ । यस्तै ८ टिम सहभागि हुने च्याम्पियन्स ट्रफी २०२५ र २०२९ मा हुनेछ ।
महिला विश्वकपमा यसअघि नै टिम संख्या बढाउने आइसीसीले निर्णय गरिसकेको छ । एकदिवसीय विश्वकपमा १४ टिमलाई दुई समूहमा विभाजन गरिनेछ र दुवै समूहको शीर्ष तीन ६म सुपर सिक्सका लागि छनोट हुनेछन् ।
यस्तै, टी२० विश्वकपमा ५-५ टिमको चार समूह हुनेछ । चार समूहको शीर्ष दुई टिम सुपर एटमा प्रवेश गर्ने आइसीसीले जनाएको छ । त्यसपछि नकआउटमा स्टेजमा खेल हुनेछ । विश्वकपमा टिम संख्या बढ्ने भएपछि नेपाल लगायत एसोसिएट राष्ट्रलाई समेत फाइदा पुग्नेछ । नेपालले सन् २०१४ मा पहिलो पटक टी२० विश्वकप खेलेको थियो । तर त्यसयता टी२० विश्वकपमा छनोट हुन सकेको छैन । एकदिवसीय विश्वकपमा भने नेपाल छनोट हुन सकेको छैन ।
सन् २०२२ को टी२० विश्वकपका लागि नेपाल सिधै ग्लोबल क्वालिफायरमा छनोट भइसकेको छ । २०२३ को एकदिसवीय विश्वकपमा लागि भने नेपालले क्रिकेट विश्वकप लिग २ को सिरिज खेल्दैछ । तर कोरोना महामारीका कारण नेपालले खेल्ने सिरिजहरु स्थगित भएको छ ।
Previous articleनेपालमा कालो ढुसी ‘ब्ल्याक फंगस’का बिरामीहरू बढ्दै, यसका लक्षण र रोकथामका उपायहरू
Next articleआज मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन अनुरोध : हेर्नुहोस ३ दिनको मौसम
फुटबल विवादबारे पत्रमार्फत अल्मुताइरीको धारणा सार्वजनिक
यो सिजनदेखि लागु हुनेगरी आईपीएलको केहि नियम परिवर्तन
कुशलको करिअरकै पहिलो शतकमा नेपालले फिलिपिन्सलाई दियो २१९ रनको विशाल लक्ष्य, कुशलको पूर्वकप्तान पारससँग रेकर्ड बराबर
नेपालले आज दोस्रो खेलमा युएईसँग खेल्दै
ओमानविरुद्ध नेपालले टस जितेर फ़िल्डिङ्ग गर्दै, लाईभ हेर्ने यस्ता छन् तरिका
सबैभन्दा सुरक्षित जेलबाट फिल्मी शैलीमा भागे ६ प्यालेस्टाइनी कैदी, चम्चाले खने सुरुङ!
अञ्जु पन्तको आवाजमा राम पियारि म्युजिक भिडियो सार्वजनिक
‘आरआरआर’ को नयाँ प्रदर्शन मिति घोषणा